घर सुधार अभिलेखहरू - घर जग्गा ब्लग - realtyWW:
श्रेणी अभिलेखालयबाट: घर सुधार
प्रकाशित मार्च 24, 2020 by Alyssa Moylan
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: मार्च 24, 2020 11: 54
अधिक मार्गनिर्देशनहरू Re. k किलोवाट रिभर्स साइकल एयर कन्डिसनरमा
एक रिभर्स साइकल एयर कन्डिशनर आजकल सबै व्यक्तिहरूको ह्रदयथ्रब हो जो चिसो चिसो मौसममा जीवित रहन गाह्रो लाग्छ। विश्वको अन्य भागहरू जस्तै अष्ट्रेलियामा पनि शीत seasonतुमा शीतलहरको शीतल छालको अनुभव हुन्छ र यो धेरै महिनासम्म रहन्छ। मानक इलेक्ट्रिक हीटर समाधान होइन किनभने यसले इलेक्ट्रिक बिल ठूलो हदसम्म बढाउँदछ। र बिजुलीमा युनिटको मूल्यको वृद्धिसँगै, खास गरी हिउँदको मूल मौसममा जहाँ धेरै महिना चिसो चिसो चलिरहन्छ, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, र यसका लागि राम्रो विकल्प खोज्नु आवश्यक छ। यहाँ पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर सुधार | Tagged K. k किलोवाट रिभर्स चक्र एयर कन्डिशनर, वातानुकूलन, रिभर्स चक्र एयर कंडीशनर | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित मार्च 19, 2020 by इभान जेभियर
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: मार्च 19, 2020 07: 14
कालीन टाइलहरू प्रयोग गरेर फाइदाहरू र कसरी एउटा छनौट गर्ने
कार्पेट टाइलहरू, अन्यथा स्क्वायर कार्पेट भनिन्छ, स्क्वायर एकल कार्पेटि t टाईलहरू हुन् जसलाई सँगै फिट गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, कार्पेट टाइलहरू हिप फाइबरको एक तह संग संगठित हुन्छन्, प्राथमिक समर्थनमा हुर्काइन्छ जुन त्यसपछि पछिल्लो तहद्वारा मजबूत गरिन्छ।
यहाँ कार्पेट स्थापना गर्ने बिभिन्न फाइदाहरु छन्:
१. स्थापना गर्न सजिलो
कार्पेट टाइलको फाइदाहरू मध्ये एक उनीहरू कत्तिको सुविधाजनक हो। जब तिनीहरू विशेष र साना इकाईहरूमा खरीद गर्न तयार छन्, तिनीहरू भण्डारण गर्न, यातायात गर्न र ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ। पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर सुधार | Tagged कार्पेट टाइलहरू | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित मार्च 14, 2020 by जोसेफ वेब
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: मार्च 14, 2020 10: 03
इलेक्ट्रीशियनका तथ्यहरू जुन तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ
इलेक्ट्रीशियन पेशेवरहरू हुन् जसले तार र बिजुली रेखाको उपचारको साथ काम गर्छन्। एक इलेक्ट्रीशियनले केहि बर्षको तालिमबाट गुज्रिरहेको छ इलेक्ट्रिकल काममा सीपको उचित कार्यान्वयनको लागि यस विषयमा अध्ययन गर्न।
हामीलाई बिजुलीको विभिन्न दक्षता हेरौं: -
# १ मास्टर इलेक्ट्रिसियन विज्ञहरू हुन्
तपाईले इलेक्ट्रिशियनलाई बोलाउनु अघि तपाईको घर वा कार्यालय भित्र कस्तो खालको काम हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको प्रमुख बिजुली कार्यको लागि, तपाईंले मास्टर इलेक्ट्रीशियन कल गर्नुपर्नेछ।
विज्ञहरू योग्य उम्मेद्वार हुन् जसले इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरि .मा डिग्री पूरा गरेका छन्। उनीहरूको प्रशिक्षार्थी कोर्स पूरा भएपछि अन्ततः तिनीहरू इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन योग्य हुन्छन्, त्यसैले अन्ततः लाइसेन्स राख्नुले सबै प्रकारको बिजुलीका लागि काम गर्न सक्षम गर्दछ, राज्य इलेक्ट्रिकल बोर्डले अनुमति दिएको अनुसार।
प्रशिक्षुताको समयमा उनलाई नियम र कानूनको बारेमा तालिम दिइनेछ जुन उपयुक्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्तिको लागि लागू गर्न सकिन्छ। त्यहाँ इलेक्ट्रीशियनहरूको लागि मुख्यतया दुई प्रकारका इजाजतपत्रहरू उपलब्ध छन् जस्तै मास्टर इजाजतपत्र र ट्राभमेन लाइसेन्स। तपाईले इलेक्ट्रीशियन छनौट गर्नु पर्छ जसको मास्टर इलेक्ट्रीशियन लाइसेन्स छ।
# २ तारको रंगले बोल्दछ
एक इलेक्ट्रीशियनको बारेमा कुरा गर्दा अब ऊ एक स्नातक हुन सक्दैन तर केवल एक प्रमाणित पाठ्यक्रम धारक हुन सक्छ। जबसम्म उसले थाहा हुँदैन र रंगको अर्थ बुझ्दैन, उसले तिम्रो परिसरमा कुनै बिजुली कार्य गर्न सक्दैन। उसले तारको बिजुली लेआउट र रंग थाहा पाउनु पर्छ। उसले घरको तार लाइनमा सम्बन्धित समस्या सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छ।
पहिले तारहरू भित्ताहरूमा तय भएका केसहरूको भित्र हुन्थे र तपाईं सजीलो तारका विभिन्न रंगहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सामान्य मानिस भएर कार्य थाहा पाउन सक्नुहुन्न, जबकि इलेक्ट्रीशियनले नकारात्मक, सकारात्मक र तटस्थ तारहरू फेला पार्दछ।
कुनै पनि गलत जडानले सर्ट सर्किट निम्त्याउँदछ र तपाईं तारहरू छोड्नुहुन्न र विशेषज्ञलाई कल गर्नुहुन्छ जसले यसमा सजिलैसँग काम पूरा गर्न सक्दछ।
एक प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन द्वारा विभिन्न प्रकारका कार्यहरू:
इलेक्ट्रीशियन स्थापना: यो धेरै सामान्य छ कि भवनहरू, प्रसारण लाइनहरू, र स्थिर मेसिनहरूको बिजुलीको तारिiring विज्ञहरु द्वारा गरिन्छ। स्थापना मर्मत वा तार-लाइन को नयाँ लेआउट को लागी हुन सक्छ। अक्सर तपाईं स्थापना इलेक्ट्रीशियन भेट्टाउन सक्नुहुनेछ जब बिजुली स्थापना कार्य सम्पन्न भयो।
मर्मत इलेक्ट्रीशियन: मर्मत इलेक्ट्रीशियनको मुख्य काम भनेको विद्युत खण्डको मर्मत कार्यलाई अगाडि बढाउनु हो। ती उद्योगहरू, आवासीय क्षेत्रहरू वा कम्प्लेक्सहरूमा आवश्यक छन्, प्राय सबै कोटीहरूका लागि विद्युतीय कामको मर्मतको आवश्यकता पर्दछ र तपाईंले कुनै इलेक्ट्रीशियनलाई कल गर्नुपर्दछ जब तपाईंलाई तार र बिजुली उपकरणमा रहेको समस्या भेटियो।
घरेलु इलेक्ट्रिकल स्थापनाकर्ता: इलेक्ट्रिकल लेआउट र वायरिंगको सबै घरेलु बिजुली स्थापना घरेलु इलेक्ट्रीशियनहरू द्वारा गरिन्छ। तिनीहरू अन्य कोटीहरू भन्दा फरक छन् किनकि तिनीहरूको काम वाणिज्यिक वा औद्योगिक इलेक्ट्रिशियनहरूबाट सीमित छ। यी इलेक्ट्रिशियनहरूसँग घरेलु क्षेत्रका लागि काम गर्ने अनुमति छ।
विद्युतीय उपकरण: तिनीहरू फरक क्षेत्र हुन्, तर प्राय: उपकरणहरू र विद्युतीय उपकरणहरू ह्यान्डलिंगमा। इलेक्ट्रीशियनको मुख्य उद्देश्य उपकरणहरू दबाब, प्रवाह र तापक्रमको रखरखाव र क्यालकुलेटिभ प्रयोगको साथ डिजाइन गर्नु हो।
कुनै पनि समय चौबीसै घण्टा यो विद्युतीय उपकरणहरू र बिजुली हो जुन सबै प्रकारका कामहरू गर्नको लागि आवश्यक पर्दछ, बाइक चलाउन समेत अटो-इलेक्ट्रीशियन चाहिन्छ र कम्प्युटर वा मेसिनरी चलाउन बिजुली चाहिन्छ। यदि त्यहाँ विद्युतीय रेखामा कमजोरी वा समस्याहरू छन् भने, तब तपाईलाई इलेक्ट्रीशियन चाहिन्छ। तिमी सक्छौ त्यस्ता इलेक्ट्रिशियनहरू अनलाइन खोज्नुहोस् र तिनीहरूको लाइसेन्स, ग्राहक समीक्षा र अनुभव स्तर जाँच गरेर सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्नुहोस्।
पोस्ट घर सुधार | Tagged सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन ठेकेदार | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित फेब्रुअरी 28, 2020 by एमेली लरेन्स
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: फेब्रु 28, 2020 09: 06
घरेलु भवनहरूमा रूफ पेन्टि fromबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभहरू
वर्षा, हिमपात, आँधीबेहरी र चरम वायुमण्डलीय तापमानबाट घरको आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ भने पनि भवनको छतलाई प्रायः उपेक्षित गरिन्छ। तसर्थ, पुरानो घरको छतलाई यसको मूल अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ, उपयुक्त पेन्टहरूको साथ छत टाइलहरू कोटिंग गरेर। यद्यपि छत चित्र सम्पूर्ण छत कोटिंग को सबै फाइदाहरुको लाभ लिन, विशेषज्ञ पेशेवरहरु द्वारा मात्र गरिनु पर्छ। त्यस्तै, राम्रो क्वालिटी पेंटहरू चाहिएको र दिगो परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि लागू गरिनु पर्छ।
घर मालिकहरूको लागि छाना चित्रकला को प्राइम गुण
छतको दीर्घायु विस्तार गर्दछ - जब पुरानो छतका टाइलहरू विशेष परावर्तनशील पेन्टको साथ लेप गरिन्छ, छत लामो जीवनको लागि दौडिन आशा गरिन्छ। छत चित्रकारीले टाइलहरू सुरक्षित गर्दछ र तिनीहरू अधिक यूवी किरण र अन्य बाह्य कारकहरू मार्फत प्रतिकूल प्रभाव पार्दैनन्। त्यहाँ यी चित्रित छत टाइलहरूबाट चुहावटको सम्भावना कम छ, टाइल प्रतिस्थापनको आवश्यकताहरूलाई कम गर्दै। यस्तो देखिन्छ कि चित्रित छतहरू धेरै दशकहरूसम्म रहन्छन्, विचित्रमा छापिएको टाइलहरूको विपरितमा जुन धेरै चाँडै बिग्रन्छ।
छतले मौसम उग्रताको सामना गर्न सहयोग गर्दछ - छत टाइलहरु जलरोधक पेन्ट संग लेपित गरिएको छ, वर्षा को पानी टाइल सतह मा गठन कुनै क्र्याक को माध्यम कोठा भित्र डुब्न सक्दैन। यी रंग कोटि coatहरूले चक्रवाती आँधीबेहरी र असिनाको बलको सामना गर्न कुनै टाढा क्षतिको सामना नगरी टाईल्सलाई बाक्लो र कडा बनाउँछ। वायुमण्डलीय तापमानमा परिवर्तनको कारण एक समान पेन्ट कोटिंगका कारण छतका मेटल टाईलहरू पनि सink्कलन वा विस्तार गर्न सक्दैनन्।
घरमा ऊर्जाको प्रयोग घटाउँछ - घरको भित्री भाग गर्मीमा धेरै कूलर रहन्छ र सर्दमा आरामसँग न्यानो हुन्छ, उत्तम छत पेंटिंगका कारण। सामान्यतया, सेतो वा हल्का रंगका पेंटहरूले गर्मीको समयमा सूर्यको तापको ठूलो मात्रा लिन सक्दछन् र जाडोमा आन्तरिक तातोबाट बच्न रोक्न सक्छन्। तसर्थ, विद्युतीय चिसो वा तताउने उपकरणहरूमा स्विच गर्न कम आवश्यक छ, दैनिक जीवनमा विद्युतीय उर्जाको एक ठूलो मात्रा बचत गर्न। चित्रित छतको यो ऊर्जा दक्षताले घरको मालिकको लागि धेरै पैसा बचत गर्दछ, मासिक बिजुली बिलहरू घटाएर। यसैले छानाको टाइल पेन्टिंगका लागि गाढा र ones्गाहरूमा पेन्टको हल्का शेडहरू प्रयोग गर्न रुचाइन्छ।
घरको बाहिरी सुन्दरता बढाउनुहोस् - ताजा पेन्टेड छप्पर भएको घर भव्य देखिन्छ। पुरानो छाना टाईलमा थप चमक पाउन यो सौंदर्य हेराई रंगको र color र रंगको छनोटमा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि घरको सौंदर्यशास्त्रले त्यस सम्पत्तीको पुन: बिक्रि मूल्य बढाउन सक्छ। तसर्थ, छत चित्रकारी एक सकारात्मक उपाय हो जुन घरको मालिकको लागि लाभदायक हुन सक्छ जब ऊ आफ्नो सम्पत्ति बेच्न चाहन्छ।
फफूको गठन रोक्छ - जब छानाका टाइलहरू वर्षा, हिउँ वा धुवाँको कारण आर्द्र रहन्छन्, यो भिज्ने सतहहरूमा लाइचेन, शैवाल र फफूंदी बढ्न सक्छ। छतमा बढेको ढुसी र फफूंदी त्यस घरका बासिन्दाहरूको लागि हानिकारक हुन सक्छ, तर लिचेन र शैवालको जराले छतमा चुहावट निम्त्याउन सक्छ। केवल समान छत चित्रले मात्र यी जीवहरूको विकास रोक्न सक्दछ, घर र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य बचत गर्दछ।
सामान्यतया, आवासीय भवनहरूको छत क concrete्क्रीट, धातु वा टेराकोटा टाईलबाट बनेको हुन्छ, जुन सजीलै पेन्ट गर्न सकिन्छ। प्रख्यात छत चित्र सेवाहरु प्रदान गर्ने कम्पनीहरू सम्पर्क गर्नुपर्नेछ, जुन बजारमा राम्रो प्रतिष्ठा हुनुपर्दछ र यस क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव चाहिन्छ। यस सेवाको लागत छतको अवस्था, त्यो छत बनाउन प्रयोग गरिएको सामग्रीको प्रकार, र छाना आकारमा निर्भर गर्दछ।
पोस्ट घर सुधार | Tagged छत चित्रकारी | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: फेब्रु 28, 2020 06: 41
व्यावसायिक सम्पत्तीहरूको लागि क concrete्क्रीट प्रयोगका फाइदाहरू
वाणिज्यिक सम्पत्तीहरूको लागि क concrete्क्रीटको उपयोग गर्न उपयुक्त छ किनकि यससँग सम्बन्धित धेरै वातावरणीय र वित्तीय लाभहरूको कारण। कंक्रीट टिकाऊ र लागत प्रभावी छ। थप, यदि तपाइँ तपाइँको कंक्रीट सतह मा कुनै क्षति फेला छ भने तपाइँ कम लागत मा नै मर्मत गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको कंक्रीट भुईला वा भित्ताहरु को लागि भारी रखरखाव लागत वहन गर्न आवश्यक छैन। तपाईं आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा कंक्रीट सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईं आफ्नो बाह्य क्षेत्रमा ठोस ड्राइभवे स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूले भारी यातायात वहन गर्न सक्छन् र ती पूर्णतया पर्यावरणमैत्री छन्।
व्यापारिक क्षेत्रमा क concrete्क्रीट प्रयोग गरेर के फाइदा हुन्छन्?
यहाँ ठूला कारणहरूको सूची छ जुन तपाईंले विश्वव्यापी व्यावसायिक सम्पत्तीहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय निर्माण सामग्रीको रूपमा क concrete्क्रीट प्रयोग गर्नुपर्नेछ। पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर सुधार, यार्ड र बगैचा | Tagged कंक्रीट, कंक्रीट ड्राइभवे | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित फेब्रुअरी 25, 2020 by इभान जेभियर
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: फेब्रु 25, 2020 12: 15
शीर्ष Re कारणहरू वातानुकूलनहरू भन्दा वाष्फजनक कूलि Syste प्रणालीहरू उत्तम बनाउनका लागि
बाष्पीकरणीय कूलरहरू लामो समयदेखि मौसम नियन्त्रण गर्न उपयुक्त विकल्प बनेका छन्। यसको लागि कारण त्यो एक हो वाष्पीकरणको चिसो कुनै पनि परम्परागत वातानुकूलित उपकरणको तुलनामा उपकरणले धेरै फाइदाहरू दिन्छ। विशेष गरी, वाष्पीकरण योग्य कूलरहरूले वातावरणमा कम प्रदूषकहरू बनाउँछन्। जहाँसम्म, हामीले बाष्पीकरण योग्य कूलरहरू प्रस्ताव दिईएको फाइदाको बारेमा छलफल गर्नु अघि, हामी यन्त्र र यसको संयन्त्रको बारेमा कुरा गर्नेछौं।
इभ्यापोरटिभ कूलिing प्रोसेस र इभ्यापोर्टिभ कूलरहरूको अवलोकन
वाष्पीय शीतकरणमा एक चिसो प्रक्रिया समावेश छ, जुन प्राप्त सुप्त गर्मीबाट फाइदा लिन्छ पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर सुधार | Tagged इभ्यापरेटिभ कूलि।, वाष्पीकरण कोलि cool्ग ग्रीन्सबरो | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित फेब्रुअरी 24, 2020 by realtyWW
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: फेब्रु 24, 2020 17: 22
Artment अपार्टमेन्ट बैठकमा समायोजन गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरू
जो कोही अपार्टमेन्टमा बस्छन् अरूको सम्पत्तीमा बस्ने चुनौतीपूर्ण चुनौतीहरू भेटिन्छन्। यदि तपाईं कहिल्यै अपार्टमेन्ट सेटिंग मा बस्नुभएको छैन भने केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले आशा गर्नुहुन्न। पानी कहिलेकाहीं नुहाउने मा चिसो चलाउँछ? मेल अब तपाइँको ढोका मा सीधा वितरित छैन? प्रश्नहरू जुन तपाईंले आफूलाई सोध्नुभन्दा पहिले कहिल्यै सोध्नुभएको छैन। अधिक तपाईंलाई थाहा छ के सजीलो स transition्क्रमणको आशा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको अर्को अपार्टमेंटमा हाम फाल्नु अघि यी अर्को सुझावहरू दिमागमा राख्नुहोस्।
सुझाव १: तपाईंको घर मालिकसँग एक स्वस्थ सम्बन्ध बनाउनुहोस्
अर्को व्यक्तिको सम्पत्तीमा बाँच्न आफ्नै जिम्मेवारिहरू आउँदछन्। तपाईले भित्ताहरू रंग्न सक्नुहुन्न जुन तपाईंको उज्यालो र colorले मनपर्दछ, तपाईंको ल्यान सफा र देखिएको हुनुपर्दछ, र तपाईं घरपालुवा जनावरहरू पाउन सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै परिस्थितिमा तपाई आफैंमा भेट्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा निश्चित छ, एक स्वस्थ जग्गा मालिक सम्बन्ध आरामदायी जीवन स्थिति को लागी महत्वपूर्ण छ।
निश्चित रूपमा तपाइँको भाँडा समयमै भुक्तान गर्न र स्वस्थ राख्नको लागि निश्चित गर्नुहोस् भाडा-देखि-आय अनुपात तपाईंको विश्वसनीयता गठन गर्न। यसले तपाईंको सम्बन्धमा विश्वास बढाउनेछ र तपाईंलाई आर्थिक रूपमा विश्वासयोग्य मान्दछ। सधैं पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईं कुकुरको स्वामित्व वा एक अतिरिक्त व्यक्ति तपाईंसँग बस्नको बारेमा ईमानदार हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ तनावको कुनै ठाउँ हुनेछैन। जब तपाईं चीजहरू लुकाउन थाल्नुहुन्छ स्थिति मुश्किल हुन्छ र चाँडै दक्षिण पल्मेट गर्न सक्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, निश्चित गर्नुहोस् लिखितमा सबै प्राप्त गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग समस्याहरू छन् भने, मर्मत सहयोग आवश्यक छ, वा कुराकानी गर्न आवश्यक छ कुराकानीको एक रसीद कायम गर्न ईमेल पठाउन सधैं सुरक्षित हुन्छ।
सुझाव २: ऊर्जा बचत गर्नुहोस्
सुविधाहरूको बिल भुक्तान अत्यधिक सम्भावना हुन्छ जब अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ। यो एकदम दुर्लभ अवसर हो जब तपाईंको भाँडाले तपाईंको युटिलिटी बिलहरू र अन्य सुविधाहरू समाहित गर्दछ। प्रत्येक महिना एक महँगो बिल कम गर्न, आफ्नो ऊर्जा प्रयोगको बारे सचेत रहनुहोस्। केवल यस ग्रहलाई सहयोग गर्न कदम चाल्नुहोस् तर तपाईंको वालेटलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्।
तपाईंको अपार्टमेन्टमा प्रकाश परिवर्तन गरेर सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईंको स्पेस पहिले नै ऊर्जा कुशल लाइट बल्बको साथ आउँदैन भने तपाईंको बिल कटौती गर्न केही खरिद गर्नुहोस्। महँगो समस्यालाई विस्तार हुनबाट रोक्न यो एक सजिलो तरीका हो। तपाईं पनि इलेक्ट्रोनिक्स अनप्लग गर्न चाहानुहुन्छ जब तिनीहरू ऊर्जा प्रयोग गरेर यो "प्रेत" पावर लोडबाट प्रयोग भइरहेको छैन। थप रूपमा, तपाईंको पानीको बिल घटाउनको लागि तपाईंको नुहाउने समयमा कटौती गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। लगातार तपाईंको उपभोग सीमित गर्नको लागि नयाँ तरिकाहरू खोज्नुहोस् किनकि अपार्टमेन्टमा बस्दा साना कुराहरू चाँडो नै थप गर्दछन्।
सुझाव 3: यसलाई तपाईंको घर बनाउनुहोस्
जब तपाईंको स्थानमा पहिलो स्थानान्तरण गर्दा गाह्रो हुन सक्छ यो घर जस्तो महसुस गराउन। तपाईंको स्पेसी बढाउनाले यसले घरलाई सहज बनाउँदछ र तपाईंको दिन अन्त्य हुन सहज हुन्छ। तपाईं लगानी गर्न चाहानुहुन्छ आवश्यक चीजहरूको सूचीको बारेमा सोच्नुहोस्। हुनसक्छ आरामदायी सोफा तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण छ वा न्यानो लाभाको तपाईंको आगाडि तपाईंको प्राथमिकता सूचीमा उच्च छ। तपाईको विशेष घरमा अपार्टमेन्ट तपाईको घर बनाउनको लागि तपाईलाई चाहिने सबै कुरालाई विचार गर्नुहोस्।
तपाईंको बैठक कोठामा टोन सेट गर्न बत्तीहरू, मैनबत्तीहरू, वा लाइट अप विसारक प्रयोग गर्नुहोस्। प्रकाशले सांसारिक क्षेत्रमा एक सम्मोहक प्रभाव पार्न सक्छ। केहि कला ह्या and्ग गर्नुहोस् र परिवार र साथीहरूको केही फोटो प्रदर्शन तपाईंको मुख्य निवास क्षेत्र निजीकृत गर्न। सुत्ने कोठाको लागि, आरामदायी रजाई अनुसन्धान गर्नुहोस् र तपाईंको आश्रयमा केही मेमेन्टोहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। यी दुई क्षेत्रहरूलाई धेरै ध्यान चाहिन्छ किनकि तपाईं प्राय जसो उनीहरू बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको अपार्टमेन्टमा एक ठाउँ कोजिंग पहिले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ तर त्यस्तो ठाउँमा आउँनुहोस् जुन तपाईंलाई अनौंठो लाग्दैन लामो समय पछि सबैभन्दा आदर्श भावना हुँदैन।
सुझाव:: भण्डारणमा लगानी गर्नुहोस्
एउटा अपार्टमेंट भाँडामा लिनु भनेको सानो ठाउँ हो! यो सुरुबाट नै स्पष्ट छ कि तपाईलाई असन्तुष्ट हुन वा लापरवाह हुन स्वतन्त्र हुनुहुन्न जब त्यहाँ अनुमति दिन पर्याप्त ठाउँ छैन। कुरालाई केहि अर्डर दिनुहोस् र दिमागको टुक्राको लागि भण्डारणमा लगानी गर्नुहोस्। सामान लुकाउँदा समस्याको समाधान हुँदैन, यससँग आफ्नो स्थानीय भण्डारण स्टोरको यात्राको साथ टेकल गर्नुहोस्।
तपाईं केही भद्दा कुर्सिहरूको साथ सुरू गर्न चाहानुहुन्छ। यो सुरुमा थोरै कठिन देखिन्छ तर, ती सस्ता हुन् र तिनीहरूले तपाईंलाई सानो ठाउँमा कुर्सीहरू भण्डार गर्न दिन्छन्। तपाईं पछि केही राम्रा व्यक्तिमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, तर यसले तपाईंलाई विचार दिन्छ कि तपाईंले कति ठाउँ लिनुपर्दछ र तपाईंको स्थान कस्तो देखिन्छ भनेर। जताततै तखताहरू थप्नुहोस्। तपाईसँग धेरै पुस्तकहरू, निक्कनाकहरू, वा सानो वस्तुहरू छन् भने शेलिभिंग तपाईको सबै भन्दा राम्रो साथी हुन सक्छ। राम्रो संख्याको अलमाराहरूले तपाईंको साना वस्तुहरूलाई डिजाईन गरिएको क्षेत्र र राम्रो प्रदर्शन ठाउँ दिनेछ। तपाइँको लुगा व्यवस्थित गर्न को लागी कुशल तरिकाहरू खोज्नुहोस्। ढोका जुत्ता होल्डरको पछाडि तपाईंको मोजा, ​​टी-शर्ट, र बिभिन्न अव्यवस्था राख्न ठाँउको रूपमा दुगुर्न सक्छ।
सुझाव 5: तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई तालिम दिनुहोस्
यदि तपाईं एक इनडोर घरपालुवा जनावर हुनुहुन्छ भने, तिनीहरू सम्भवतः घर भाँचेर र परिपक्व हदसम्म तालिमप्राप्त छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईं घरको आँगनको साथ घरबाट सर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई घर भित्र जीवनका लागि अनुकूल हुन गाह्रो हुन सक्छ। एउटा अपार्टमेन्टमा तपाईंको शराबी उत्तम मित्रको लागि धेरै ठाउँ छैन त्यसैले तपाईं केही उचित प्रशिक्षणको खोजी गर्न लाग्नु भएको छ। साथीहरू र परिवारबाट इनडोर घरपालुवा जनावरहरू लिएर स्रोतहरू बटुल्नुहोस्। सुझावहरू वा प्रख्यात प्रशिक्षकहरूको सन्दर्भको लागि वरिपरि सोध्नुहोस्।
तपाईंको घरपालुवा जनावर तोड्नु अपार्टमेन्टमा बस्दा महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं सकेसम्म धेरै कार्पेटहरूमा कुनै धक्कै धब्बा हटाउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईंको घरपालुवा जनावर एकदम भोकल छ र अक्सर बार्क गर्न वा आवाज निकाल्छ भने, एक ट्रेनर वा क्यामेरा हुनु आवश्यक हुन्छ जब तपाईं उनीहरूलाई शान्त पार्न घर हुनुहुन्न। केही अपार्टमेन्टमा रम्पुन्स्टियस जनावरहरूको लागि कडा नियमहरू हुन्छन् जुन जरिवानाबाट निकालिन्छ। थप रूपमा, तपाईंको पालतु पशुलाई सकेसम्म धेरै बाहिर निकाल्नु आवश्यक हुन्छ यदि तपाईंसँग ठूलो जनावर छ जुन ठाउँ आवश्यक छ। यसले रिलिजलाई उर्जामा सहायता पुर्‍याउँछ र तपाईंको कुनै पनि फर्निचर नष्ट हुन वा भित्ताहरू भत्काउनबाट जोगाउँदछ।
अपार्टमेन्टमा बस्नु भनेको कसैको लागि समायोजन हो जसले यस अनौंठो परिस्थितिको सामना गर्दैन। तपाईं आफ्नो घरधनी वा सम्पत्ती प्रबन्धकको नियम अन्तर्गत हुनुहुन्छ र अब तपाईंले आफ्नो नयाँ ठाउँमा बस्नको लागि सर्वोत्तम व्यवहार गर्नुपर्छ। यी सुझावहरू सम्झनुहोस् तपाईंको संक्रमणलाई सजिलो बनाउनको लागि जब तपाईं आफ्नो नयाँ स्थानमा अनुकूलित हुनुहुनेछ।
पोस्ट घर सुधार | Tagged अपार्टमेन्ट | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित फेब्रुअरी 22, 2020 by realtyWW
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: फेब्रु 22, 2020 21: 04
२०२० को लोकप्रिय आन्तरिक डिजाइन प्रवृत्ति
कुन आन्तरिक डिजाइन प्रवृत्ति २०२० मा हावी हुन गइरहेको छ? प्रकृति आकर्षणको केन्द्र हुनेछ? २०२० ले डिजाईन ईन्डस्ट्रीमा धेरै परिवर्तनहरू देख्न सक्छ, र भित्री डिजाइन पनि यसको अपवाद होईन। धेरै नयाँ चलनहरू क्षितिजमा छन्।
तपाई धेरै खर्च नगरी तपाईको घरको भित्री भागमा नयाँ रूप दिन सक्नुहुन्छ। भीडमा बाहिर उभिनको लागि केहि अपग्रेड गर्नका लागि यो सही समय हो।
भन्नु पर्दैन, धेरै नयाँ ईन्टीरियर डिजाइन प्रवृत्तिले पछिल्ला प्रवृत्तिहरू प्रतिस्थापन गर्दछ। हामीले पाँच लोकप्रिय डिजाइनहरूमा छनौटहरूलाई संकुचित गरेका छौं। एक चोटि हेर्नुहोस् र त्यसपछि निर्णय गर्नुहोस् जुन कुन प्रवृत्तिले तपाईंको घरको आन्तरिक अन्य डिजाइनहरू अनुकूल गर्दछ।
तर यी डिजाइनहरूमा मात्र आफूलाई सीमित नगर्नुहोस्। तपाईंले धेरै धेरै प्रभावशाली डिजाइनहरू फेला पार्नको लागि खोजी गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको बस्ने कोठामा प्रकृति
आन्तरिक डिजाइन प्रवृत्ति २०२० मा प्रकृति केन्द्रित हुनेछ। माटोको लक्जरी धेरै प्रकृति र न्यानो तत्त्वहरूसँग मिल्नेछ। यदि तपाइँ वातावरणीय मैत्री डिजाइनहरू मनपराउँनुहुन्छ भने, तपाइँ धेरै आविष्कारको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ घरको ईन्टिरियरलाई एक रचनात्मक र प्रेरणादायी रूप दिन।
प्राकृतिक काठ उत्तम जोड यो हुनेछ। तपाईं यसलाई विभिन्न प्रकारका ढु of्गाका सामग्रीहरूसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै ग्रेनाइट, ढु pe्गा, र संगमरमर। यी सबै पूरक हुनेछन् र प्राकृतिक तत्वहरू जस्तै देखिनेछन्। जहाँ सम्भव छ, यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि रिसाइक्ल्ड र हस्तशिल्प फर्निचर प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्।
फायरप्लेस सेन्टर तपाईंको पुरानो घरलाई आधुनिक स्पर्श दिन सक्छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंसँग तपाईंको घरमा धेरै प्राकृतिक तत्वहरू छन्, र त्यहाँ केन्द्रमा फायरप्लेस हुनेछ। तपाईं देख्न र महसुस गर्न मन पर्छ। तपाईं एक जाडो रातमा आगोको मजा लिन सक्नुहुनेछ जबकि धेरै प्राकृतिक तत्वहरू द्वारा घेरिएको।
प्रतिकूल मौसम अवस्थाहरूमा तपाईंको ठाउँको आनन्द लिन यो थप उत्तम हुन सक्छ। तपाईंको परिवारका सबै सदस्यहरूले यो भित्री डिजाइन प्रवृत्ति मन पराउँछन्। साथै, फायरप्लेसहरू तपाईंको बस्ने ठाउँको लागि आरामदायक भावना प्रदान गर्दछ।
तपाईं ईंट, ढु stone्गा, वा faux सहित आफ्नो मनपर्ने सामग्री को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो फायरप्लेस बनाउन। यो तपाईंको बैठक कोठा वा हलमा केन्द्रबिन्दु हुन सक्छ। तपाईं पूर्ण लुक प्राप्त गर्न तपाईंको फायरप्लेस वरपर बिल्ट-इनहरू वा शिपलप थप्न सक्नुहुन्छ। यी चीजहरू एक अर्काको पूरक हुनेछन्।
आधुनिक पर्खाल बत्तीहरू
जब यो प्रकाशको कुरा आउँदछ, तपाईं लोभनीय स्कोन शैलीहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो डिजाइन प्रभावशाली छ र साथै धेरै ठाउँ लिने छैन। यो सुविधा तपाई ट्याब्लेटप स्थान भन्दा कममा थप्न सक्नुहुन्छ।
यी आधुनिक sconces र भित्ता बत्तीहरु चिकना म्याट समाप्त संग आउँछ। तपाईको इन्टीरियरलाई अद्वितीय रूप दिन यी ठूला स्वि sw्ग हतियारहरूमा पनि उपलब्ध छन्। सही रूपमा छनौट गर्दा, यी अद्वितीय रूपले डिजाइन गरिएको बत्तीहरूले तपाईंको घरको भित्री भागमा स्मार्ट लुक दिन सक्छ।
कालो फिर्ता हुनेछ
कालो सधैं सधैंको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय आन्तरिक डिजाइन प्रवृत्ति मध्ये एक हुनेछ। हामी मध्ये धेरै कालो संग गलत जान सक्दैन। पुरानो कालो रंगबाट नयाँ र रचनात्मक केहि प्राप्त गर्नका लागि अनुभवी आन्तरिक डिजाइनरहरू कालो प्रयोग गर्दैछन्।
कालो फर्निचर, फिक्स्चर, भित्ताहरू, र कालो फिनिशहरू जाँदैछन् भित्री डिजाइन उद्योग मा लिनुहोस्। यदि तपाईं केहि कालो थप्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले फेरि सोच्न आवश्यक पर्दैन। केवल सुनिश्चित गर्नुहोस् कि डिजाइन स्टाइलिश छ र तपाईंको घरको अन्य कन्फिगरेसनहरूको पूरक छ।
यदि तपाईं केहि नयाँ कालो प्रवृत्तिहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कालो पर्खालहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हो, कालो पर्खाल एक शैली बयान बन्न सक्छ जब एक शक्तिशाली र प्रभावशाली लुक प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं कालोको पक्षमा हुनुहुन्न भने, तपाईं हल्का र colorsहरूसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रास्ट रंगहरूले तपाईंको ठाउँको उपस्थिति र भव्यता बढाउन सक्छ।
ग्रीन एक्सेंट्स जस्तो कि अर्थी र colors्ग र सामान २०२० मा लोकप्रिय आन्तरिक डिजाइन प्रवृत्ति मध्ये एक हुनेछ। यिनीहरू २०१ 2020 मा सबैभन्दा उल्लेख गरिएको डिजाइन प्रवृत्ति पनि थिए। यही प्रवृत्ति यस बर्ष बलियो हुनेछ। तपाईंको घरमा हरियाली थप्नको लागि तपाईं सक्कुलन्टहरू र सजावटको बोटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं यी कुनै पनि वा धेरै यी आन्तरिक डिजाइनहरू प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। डिजाईन ट्रेंडहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित गर्दछ र तपाईंको आन्तरिक डिजाइनमा एक विशिष्ट र आधुनिक छुनुहोस्।
पोस्ट घर सुधार | Tagged भित्री डिजाइन | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित फेब्रुअरी 21, 2020 by ल्यूक ह्यान्कक
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: फेब्रु 21, 2020 17: 21
घर पुन: निर्माण प्रोजेक्टको लागि सर्वश्रेष्ठ फोहोर डिस्पोजल विकल्प के हुन्?
नयाँ घर पुन: निर्माण प्रोजेक्ट सुरू गर्नु उत्साहजनक समय हुन सक्छ, तर यसले तपाईंलाई चिन्ताले पनि भर्न सक्छ। त्यहाँ विचार गर्न धेरै चीजहरू छन् जस्तै तपाईंको प्रोजेक्टको लागि एक समग्र बजेट र तपाईंलाई कुन उपकरण र सेवाहरू आवश्यक पर्दछ। तपाईंले आफ्नो परियोजनाबाट उत्पन्न सबै फोहोरलाई के गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ। यहाँ २०२० मा घर पुन: निर्माण प्रोजेक्टको लागि सबै भन्दा राम्रो अपशिष्ट निपटान विकल्पहरू छन्।
तपाईंको पिकअप र तपाईंको समय
एउटा सानो परियोजनाको लागि, धेरै घरमालिकहरूले ल्यान्डफिलको लागि यात्रा गर्न रोज्नेछन् उनीहरूको आफ्नै पिकअप ट्रकमा वा उनीहरूले परिवारका सदस्य वा साथीबाट लिएको छ। यो साधारण विचार जस्तो देखिन्छ, तर यो अलि जटिल हुन सक्छ यदि तपाईंले बहु डम्प रनहरू बनाउनु पर्छ भने।
यो समय खपत र थकाउने हो र यदि तपाइँले धेरै रनहरू बनाउनु पर्छ भने तपाईको सप्ताहन्तमा बर्बाद गर्न सक्दछ। जब सम्म तपाईं आफ्नो सबै कचरा एक फिटमा फिट गर्न सक्नुहुन्न र ल्यान्डफिल तपाईंको घरको नजिक अवस्थित छ, हामी यो विकल्प सिफारिस गर्दैनौं।
एउटा डम्पस्टर भाँडामा लिदै
यदि तपाईं आफ्नो समयमा र तपाईंको लागि आरामदायी गतिमा परियोजनामा ​​काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, डम्पस्टर भाँभा सायद तपाईंको उत्तम विकल्प हो। यो एक आकर्षक विचार हो र तपाईंलाई कम से कम कामको आवश्यक हुन्छ।
एक कम्पनीले तपाईको ड्राइभवेमा डम्पस्टर वितरण गर्दछ, तपाईले आफ्नो सम्पत्ती नछोडिकनै भरिदिनुहुन्छ र ती भरिए पछि यसलाई लैजान्छन्। के धेरै मानिसहरूलाई यस विकल्पबाट टाढाका चीजहरू उनीहरूको लागी यो महँगो हुन्छ। कबाड हटाउने कम्पनीलाई काममा लिने तुलनामा यो वास्तवमा छैन। यदि तपाईंलाई जंक हटाउने कम्पनीले ल्यान्डफिलमा धेरै रनहरू बनाउन आवश्यक छ भने लागतहरू द्रुत रूपमा थप्न सक्दछन्।
एक हप्ताको डम्पस्टर भाडा वा स्किप भाडामा फरक लागत हुन्छ, तपाईं अवस्थित भएको स्थानमा निर्भर गर्दै। यस सेवाको मूल्य निर्धारण निश्चित रूपमा फरक पार्ने छ जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ संसारमा। एल्जिन इलिनोइसमा डम्पस्टर भाँडामा लिदै यदि तपाई ब्राइटन इ England्ल्यान्डमा स्किप भाडामा लिनुभयो भने भन्दा फरक हुनेछ। तपाईंको भाँडाको मूल्य तपाईको स्थानीय ल्यान्डफिल वा ट्रान्सफर स्टेशनमा फोहोरबाट मुक्त हुन कति खर्च हुन्छ भन्नेमा सबै निर्भर गर्दछ। तर, यदि तपाइँ तपाइँको घर रिमोडलिंग विकल्पबाट धेरै अपशिष्टहरू प्राप्त गर्ने आशा गर्नुहुन्छ भने यो वास्तवमा कम्ती महँगो र सबैभन्दा सुविधाजनक विकल्प कबाड हटाउने कम्पनीलाई काममा लिने विपरित हो।
एउटा रद्दी हटाउने कम्पनी
वसन्त क्लीनआउट वा घर पुन: निर्माण प्रोजेक्टबाट फोहोर वा कबाड हटाउन खोज्ने घरमालिकहरूको लागि अर्को लोकप्रिय छनौट रद्दी हटाउने कम्पनीलाई काममा लिनु हो। त्यहाँ धेरै बिभिन्न विकल्पहरू छन् यदि यो तपाईंले छनौट गर्नुभएको मार्ग हो भने ठूला कम्पनीहरू र एक-मानिस अपरेशन सहित तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया खातामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यी कम्पनीहरूले आफूलाई रद्दी हटाउनको लागि सस्तो विकल्पको रूपमा विज्ञापन गर्दछन्, तर तिनीहरूको लागत पर्याप्त विचारणीय हुन सक्छ यदि तपाईंलाई ल्यान्डफिलमा १ भन्दा बढी यात्रा गर्नु आवश्यक छ भने।
तिनीहरू साना परियोजनाहरूको लागि एक उत्तम विकल्प हो, तर ठूलाहरूको लागि वास्तवमै व्यावहारिक हुँदैन। निस्सन्देह, तिनीहरूले तपाईंको लागि भारी भार उठाउने प्रायः काम गर्छन् र त्यो महत्त्वपूर्ण विचार हो। यदि तपाईंसँग कुनै शारीरिक सीमितताहरू छन् जुन तपाईंलाई आफैं कार्य गर्नबाट रोक्छ भने, कबाड हटाउने कम्पनीहरू उत्तम विकल्प हुन सक्दछन् जबकि तपाईंलाई आफ्नो तालिकालाई समन्वय गर्न आवश्यक पर्दछ जुन गाह्रो हुन सक्छ। स्वस्थ व्यक्तिको लागि त्यहाँ उत्तम विकल्पहरू छन्।
तपाईंको विकल्पहरू सीमित छन् जब यो तपाईंको घरको मर्मत मलबेको फोहोरको लागि आउँछ। कहिले तपाईंको विकल्पहरूको तुलना गर्दै, प्रत्येक विधिमा उनीहरूको पक्ष र विपक्षहरू हुन्छन् र कुन प्रोजेक्टको लागि सब भन्दा राम्रो हो निर्णय गर्नको लागि तपाईले आफ्नो आवश्यकताहरू के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि तपाईं अन्तिम सस्तो विकल्प चाहनुहुन्छ भने, तपाईं स्थानीय ल्यान्डफिलमा धेरै यात्राहरू गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं कुनै पनि व्यक्तिगत श्रम संलग्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं रद्दी हटाउने कम्पनीको विकल्प छान्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग धेरै मलबे छन् तर लागत-दक्ष विधि चाहानुहुन्छ भने तपाईं डम्पस्टर भाडा छान्नुहुनेछ वा भाडा छोड्नुहोस्।
पोस्ट घर सुधार | Tagged डम्पस्टर भाडा, कबाड हटाउने, फोहोर फाल्ने | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
प्रकाशित फेब्रुअरी 19, 2020 by Alyssa Moylan
अन्तिम अद्यावधिक गरिएको: फेब्रु 19, 2020 07: 12
ट्राभर्टाइन पावर्सका फाइदाहरू जान्नुहोस्
पहिले, मार्गहरू र पदयात्राहरू सिमेन्ट गरिएका थिए वा कंक्रीटको बनेका थिए। विकल्पहरू कम थिए त्यसैले अधिकांश देशहरूको सरकार, र घरपरिवारले सडक मार्ग वा घर बाहिरका बाटोहरू पक्का गर्नको लागि कंक्रीटमा निर्भर हुनुपर्‍यो। तर ट्र्राभटिन पेवर्सको आविष्कारका साथ यो धेरै परिवर्तन भएको छ। व्यक्तिहरू सँधै आफ्नो घरहरू राम्रा बनाउन चाहन्छन्। दुबै भित्री र घरको बाहिरी भागले घर पूर्ण र सुन्दर देखिन्छ। यसले सम्पूर्ण ग्लोभमा ट्राभर्टिना पेभरहरूको प्रयोगलाई बढावा दियो। पढाइ जारी राख्न →
पोस्ट घर सुधार | Tagged Pavers, Traversine Pavers | टिप्पणी छोड्नुहोस् |
1 पृष्ठ 7812345अर्को>अन्तिम »